Hip Hop Abs Abs DVD DVD Kaliya $ 22.90 - Lacag Dib u Leh
Home » Amazon » Hip Hop Abs Xadid Dheer oo kaliya DVD $ 22.90
Dib-u-bixinnada Fududeeyaha Waxay soo bandhigtaa iibka Hip Hop Abs Xad-dhaaf ah Amazon
Hip Hop Abs Extreme Haatan Hadda Xaddiga $ 22.90 - Free Super Saver Shipping waa lacag la heli karaa haddii aad ku bixiso $ 25
Shaun ayaa kor u qaaday xoojinta labadan siyaabood ee cusub ee Hip Hop Abs. Cudurka 'Extreme Cardio' iyo 'Extr' Abs waa ay ku siiyaan natiijooyin aad u cajiib badan.
Iyada oo Hip Hop Abs Extreme, waxaad dillaaci doontaa dufanka oo aad garaaceysaa maqaarkaaga-adigoon waligaa dhulka galin. Shaun T saxeexa qoob-ka-cayaarka ee saxeexa ayaa kaa caawin doona qaabka ugu wanaagsan ee noloshaada.
U hubso inaad la tashato dhakhtarkaaga oo raac fariimaha badbaadada inta aadan billaabin barnaamijka jimicsiga.
Hip Hop Abs Extreme waxaa ka mid ah 2 jimicsi cusub: Kaadi-yari Xoogan
Cudurka 'Extreme Cardio' waa mid aad u qiyaas ah hal saac oo loogu talagalay in lagu dhaliyo dufankaaga
Xoog-dhaafka ah waxaa loogu talagalay markaad waqti gaaban tahay, laakiin aad u baahan tahay mid xoog leh
Wadarta saacadaha shaqada: 75 daqiiqo
Riix Halkan si aad u iibsato Hip Hop Abs Abs DVD Diyaargarow ka Amazon
* Qiimaha $ 22.90 waa mid ka mid ah 8 / 27 / 13 3: 21 PM PM. Sicirka qiimaha iyo helitaanka waa sax marka loo eego taariikhda / wakhtiga la tilmaamay iyo in la bedelo. Qiimaha iyo helitaanka macluumaad kasta oo lagu soo bandhigay Amazon.com xilliga iibsigu waxay khuseysaa iibsashada alaabtan
August 27, 2013 Jimicsiga Amazon, DVD No Comment	2 dareenka cusub ee hip-hopka ah, shooga xumad daran, Dvd Cardi Dheer ah, Hooska ka fogee iibka xad-dhaafka ah